ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့အလှူလေးတစ်ခု | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Events/Fundraise » ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့အလှူလေးတစ်ခု	39
PS - အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှန်သမျှလှူချင်လှပါတဲ့ရွှေကြည်ရယ်ပါ။ ပိုက်ဆံမရှာနိုင်တာကခက်နေတယ်။ ရွာအလှူမှာလည်းနည်းနည်းပဲလှူလိုက်နိုင်ပေမယ့် စုပေါင်းအင်အားနဲ့ အားလုံးရဲ့အလှူငွေတွေဟာ မြေစာပင်ရခိုင်သွေး ချင်းတွေအပြင် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကချင်ဒေသကစာသင်ကျောင်းလေးကိုပါလှူလိုက်နိုင်တယ်လို့တွေးမိတိုင်း ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ အလှူကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့သူကြီးနှင့် စီစဉ်ပေးသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ဒီရွာသူဖြစ်ခွင့်ရတာကို လည်းဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း..။
ရွှေ ကြည် has written 27 post in this blog.
shwe kyi says: copy/paste ဖြစ်သွားရှာပေါ့။
lynn lynn says: ရွှေကြည်ရေ ရွှေကြည်ရဲ့ ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ပီတိကူးစက်ပြီး သာဓုခေါ်ပါတယ်။ နောက်လည်း အများကြီးလှူဒါန်း နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ထားလေးကိုလည်း မြင်လိုက်ရတယ်။
shwe kyi says: ကျေးဇူးပါ လင်းလင်းရေ။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေနော်။
ko khin kha says: မွန်မြတ်သောစိတ်ထားတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့တွေကိုဖတ်ရတော့ ချီးကျုးမိပါတယ် မရွှေကြည်။
ဦးဦးပါလေရာ says: တကယ်ကောင်းတဲ့ အလှူပါ တူမလေးရေ
snow white says: စနိုးလည်း လေးလေးပါလေရာလိုပါဘဲ နောက်လိုက်အဖြစ်ငွေအားတော့ အရမ်းမတက်နိုင်ပေမယ့် လူအင်အားလိုက်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ ရှင့်။။ ရွာထဲမှာ အဲ့လိုမျိုး အလှူ တစ်ခုဖြစ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ် ပန်းတနော်အလှူကိုလည်းမလိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူး နောက်အလှူတွေကို တော့ လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ် စနိုးတို့ရွာလေးလည်း အလှူများများပြုလုပ်နိုင်ပါစေ။။။
shwe kyi says: ကိုခင်ခရေ ပေးတဲ့ဆုတဲ့တလုံးတ၀တည်းပြည့်ဝရပါလို၏။ ကျေးဇူးပါ။
amatmin says: မရွှေကြည်ရေ..
အလင်းဆက် says: ရွှေကြည်ရေ..
ဇောက် ထိုး says: သာဓု…သာဓု………သာဓု…………..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8208
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပေးဝေမျှကမ်း
shwe kyi says: လေးလေးရေ သူတို့ဘ၀ကိုလက်တွေ့မြင်ရတော့ တကယ်ကိုကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
shwe kyi says: ကိုအမတ်ရေအားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် မျှော်လင့်ချက်အမြန်ပြည့်ပါစေလို့။
စနိုးလေးရေ ၀င်ဖတ်သွားတယ်နော်။ အာရီးဂတ်တောကိုဆိုင်းမတ် :D
အလင်းဆက် says: အရီး ဂွက်ထော်ကို…ဆိုင်းတွေက…မှတ် လိုက်တယ်..ဟုတ်လား။
manawphyulay says: ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သာဓုခေါ်ရင်း အလှူအတွက် မျှဝေယူသွားပါတယ်ညီမလေးရေ…. အေးချမ်းပြီး ပီတိကို ခံစားမိပါတယ်။ နွေးထွေးတဲ့ကမ်းလက်တွေနဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကြိုဆိုကြတာပေါ့နော်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4546
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: မရွှေကြည်ရေ ..
မောင်ပေ says: သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ရွှေကြည်လေးရေ
shwe kyi says: ကိုပေ ရေရွှေကြည်လည်း သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ရွာအလှူအတွက်ကြိုးစားပေးနေလို့လေ။
shwe kyi says: မ မနောရေ သာဓုခေါ်လို့ဝမ်းသာရပါတယ်။ ကျေးကျေးပါအစ်မရယ်။
ကိုအလင်းဆက် မဂွက်ကိုမစရဲပါဘူးနော် :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2265
htoosan says: တစ်ယောက်တစ်လက် ၀ိုင်းဝန်းတွဲကူကြရင်း နဲ့ တစ်ချိန်တော့ ပိုကောင်းတဲ့ ဘ၀လေးတွေ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်လာကြမှာပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5292
MaMa says: အဲလို ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်လို့ထင်တယ်…
(ရတနာသိုက် ရှာပုံတော်မှာ ရေးထားတာတွေ့လို့) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7028
ကြောင်ကြီး says: ရွှေကြည့်ကို ဦးကြောင် ခြစ်မိသွားပီကွယ်…ဂျစ် ဂျစ်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3341
အရီးခင်လတ် says: ရွှေကြည်ရေ
ဒီ ကြောင် နဲ့ တွေ့ရင်တော့ ပိုဆိုးမယ်။ :D
ahnyartamar says: တကယ်ကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။
Wow says: ဆင်တူယူနီဖောင်းလေးတွေနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူသွားလှုကြတာ ကြည်နူးစရာပါရွေကြည်ရေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 562
Hnin Hnin says: ပုံတွေကို ကြည့်ရင်း ကိုယ်တိုင်သွားလှူချင်စိတ်ကို ပေါက်သွားပါတယ်…
shwe kyi says: ကိုထူးဆန်း လေးတော့မလေးစားပါနဲ့ဦးနော်ရွှေကြည်ခြေထောက်မြေကြီးနဲ့မထိတော့ဘူး။ :D
ဦးကြောင် ကြာင်လက်သည်းကအဆိပ်ရှိတယ်ကြားဖူးတယ် ရွှေကြည်ကြောက်ကြောက်။ ချစ်ခင်လေးစားရပါတဲ့ အရီးရေ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါရစေ။
etone says: မရွှေကြည်ရေ ….
shwe kyi says: မအိတုံ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အမြန်ဆုံးကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါစေလို့..။
Ma Ei says: ခေတ်လူငယ်တွေဖြစ်ပြီး
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: တကယ်ကို ကြည်နူးဖွယ်ရာ အလှူလေးတစ်ခုပါ…
shwe kyi says: မအိ အားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။
အလင်းဆက် says: ရွှေကြည်က…ကိုရီးယားမင်းသမီးနဲ့ တူတယ်ဆိုတော့…
ဖိုးထောင် says: ကိုပေ – ကိုပေစိ ခင်ဗျားရွှေကြည် ပုံတွေ့လိုက်လား
shwe kyi says: ကိုအလင်းဆက် ဂျွန်စောကအခုဆိုအသက်တော်တော်ကြီးလောက်ပြီနော။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 50
Aung thu oo says: စနွင်းမကင်းရေ၊၊၊ အဲ မှားလုို့ ရွှေကြည်ရေ၊၊၊ လေပြေတွေအလာမှာ ဖွေရှာကာ အဖြေရှာရရင်ဖြင့်၊ ဤမြေကမ္စ္ကာမှာ လုိုနေရှာတာက မေတ္တာတရားဘဲ မဟုတ်ပေဘူးလား ရွှေကြည်ရဲ့၊၊၊ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ ချစ်သတာပွားမှသာလျှင် အချစ် ကမ္တာမြေကြီးက လစ်ဟာနေတဲ့ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ဂတရားတွေ ကုို တထောင့်တနေရာက ကွက်လပ်ဖြည့် ပရဟိတမည်ပေမယ်မဟုတလား ရွှေကြည်က စေတနာတွေစီပေးမှတော့ စာအလီလီ ဘာမထီဇာနည်ဖွားစိတ်ဓါတ်တွေရှိကြသမုို့ သာဓု သာဓု သာဓုလုို့ခေါကြရတော့မယ် လူအပေါင်းတုို့ရေ ရွှေကြည်ရတနာကုို လေပြေအလာမှာ စိန်စီတဲ့ချယ်ကာလီနဲ့ တယဝတိန်သာအထက်နန်းဆီသုို့ အားလုံးသောက်ရန်းသာပုို့လုိုက်ကြပါစုို့ဗျား။။။
lynn lynn says: အဟိ ဇာတ်ခေါင်းကွဲလာတာထင်တယ်။ နောက်တာနော်။
mamanoyar says: ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုလိုပုံလေးတွေကြည့်ပြီး
shwe kyi says: အောင်သူဦးရေ နင်ပြောတာနဲ့ငါတော့ပွဲထဲကဇာတ်တော်ကြီးကိုမြင်ယောင်မိသွားတယ်။
Comments By Postမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဘဲဥ - ခရီးသည်ကြီးကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ဘဲဥ - MaMaမင်္ဂလာပါ - Myo Thant - may julyမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - N@ng Ghi Ghi Joe Z - ko pauk mandalayသူ - ရွှေ ကြည် - Mobile13လူပါး ပုလင်းကွဲရှ - MaMa - MaMaရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Miss Crystalline - MaMaရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ရွှေတိုက်စိုးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - MaMa - N@ng Ghi Ghi Joe Zယုံလား? - MaMa - ခရီးသည်ကြီးCongress - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - parlayar 46ကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAအလှူခံဖလားကြီးပိုက်ကာပြန်လာတယ်..... - ဝရမ်းပြေးအဘဝက် - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - Myo Thant - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကထူးဆန်း - kyeemiteမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Myo Thant - ဘဲရှုပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ခင် ခ - Hnin Hninနယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ဘဲရှုပ် - Soe Naunk``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ခင် ခ - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - pazflor - အရှင် သခင် ဆရာ ကိုယ်တော် mobileဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - Guest - - ဦးကြောင်ကြီးကတွတ်ပေါက် ဘဲဥစောင့် - Mobile13 - MaMaကား ဒုက္ခ - Mobile13 - ဆူးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77757 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67182 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58110 Kyats )MaMa (57596 Kyats )Top Posts & Pagesမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်